Kutsoropodza kunovaka kweiri nani Linux | Linux Vakapindwa muropa
Imwe nguva yapfuura isu takaburitsa nhau nezve Linux Inobata! (inoshandurwa se "Linux inoyamwa"), hurukuro yaBryan Lunduke yaanogadzira gore rega rega kushoropodza software yemahara uye nharaunda yeLinux, asi panguva imwechete inoratidza kushamisika kwesoftware iyi uye nehungwaru shure kwayo kunyangwe paine matambudziko aripo. Iye zvakare anoita ratidziro pamusoro pekuoma kwesar uye kugadzirisa iyo GNU / Linux system uye nemabatirwo akaitwa makore aya pamusoro pemakore.
Huye, mazuva mashoma apfuura ndakasangana nechinyorwa kubva kuFSF ichinyora zvinonyanya kufadza zvirongwa dzaidikanwa nekukurumidza kuenderera kupedzisa chirongwa cheGNU uye kuti pakanga pasati pave kana paive nematanho madiki ekukura. Rondedzero iyi yaiitirwa kuti vagadziri vadzike kubhizinesi. Kubatana nepfungwa iyi neiyo yeLinux Sucks, ini ndoda kupa maonero angu (iwe unenge uine mamwe akasiyana zvakanyanya zvechokwadi) ayo ari iwo asina kusimba mapoinzi achienzaniswa nemamwe OS uye kuti Linux yaigona kuvandudza.
Rumbidzo yakapusa yeLinux seyakanakisa yezvakanakisa inoparadza yepurojekiti. Linux kana GNU kernel vanogadzira havadi clappers kuvabiridzira uye kuvaudza mashandiro avanoita zvese, asi vatsoropodzi kuvanongedzera munzira kwayo. Kutanga ne linuxeros, uye kubva pane ino blog, isu tinofanirwa kuve takatsoropodza, nekuti sekutaura kwaKepler: "Ini ndinoda kutsoropodzwa kwakakomba kwemurume akangwara kupfuura kubvumidzwa kwevanhu vasina kufunga."
Ongororo yangu ndeiyi, wedzera yako mune zvakataurwa:
Mashoma software uye Hardware makambani anobatanidzwa: ehe, kune akawanda uye mazhinji makambani anofarira Linux, achigadzira inoenderana mitambo yemavhidhiyo, software uye Hardware yeiyi chikuva. Asi ichiri kure kure nemamiriro azvino ayo Microsoft ane Windows. Kana varipo kuwanda kwesarudzo dzezvirongwa kubva kune mamwe mapuratifomu, asi hazvisi zvekuva nedzimwe nzira, ndezvekukwanisa kuve nemikana yakafanana seayo pane mamwe mapuratifomu. Kuti makambani atange kutarisa Linux zvinofanirwa kukunda chikamu chikuru chemusika sezvo iine Windows kana Mac OS X, asi izvi zvakaoma nhasi. Naizvozvo, mhinduro chete yandinoona ndeye kukurumidza kuvandudza mapurojekiti senge Waini kana Darling.
Kupatsanurwa: Ichi ndicho chinhu chakambotaurwa nezvacho kwenguva refu uye Linus Torvalds anoita kunge achibvumirana nazvo paku "gadzira", asi pamwe kutsvaga kutsvaga kwepasirese uye kusaparadzira kuedza zvakanyanya kunogona kugadzirisa matambudziko mazhinji uye kugadzirisa mamwe. Izvi zvinoreva kuti, zvakanaka kuva nemadistros akati wandei ekusarudza kubva kana akasiyana enzvimbo yedesktop kuti ushandise iyo yatinoda zvakanyanya kana inoenderana nezvatinoda, asi kubva ipapo kuenda kune mazana nemazana ekuparadzirwa kana gumi nemaviri enzvimbo dzemifananidzo. ... Kune rimwe divi, kupatsanurwa uku kunoitawo kuti poindi yapfuura inetse (semuenzaniso, ne nhamba yemapakeji RPM, DEB, ... uye zviripo distros), isiri-standardization inoita kuti vakawanda vadzokere pasi. Muchidimbu, izvi zvinoshandura kuvavakagadziri vazhinji vanofarira iyo GNU / Linux nyika asi vese vachiparadzira mauto avo pane kujoina. Pamwe modhi yekusimudzira yakanyanya kufanana neyemamwe mapurojekiti akaita saFreeBSD inogamuchirwa.
Dhizaini uye mashandiro: Windows uye Mac OS X ndivo masters pane izvi, ichokwadi kuti vanoita kunge masisitimu akagadzirirwa madhivi, asi kana iwe uchida kuwedzera kusvika kweLinux uye kuunza kune ruzhinji, iwe unofanirwa kugadzira inoratidzika uye inonzwisisika nharaunda. Mamwe mapurogiramu anoshaya GUI kana asiri kunyatsoshanda, unofanirwa kuchinja izvi. Canonical yakwanisa kutora iri zano reUbuntu uye iri kuita basa risinganzwisisike, ndosaka iri rimwe remadhizaini anonyanya kushandiswa (pasina kudzikisira kubva kune mamwe mapurojekiti akaenzana mune izvi). Isu tese tinoda sisitimu yakanaka seMac OS X uye seinoshanda, isina kuwira mukukanganisa kweApple kwekuregeredza kumagumo.
Network stack: Gore rakapera, Facebook yakaedza kugadzirisa Linux network stack nekuhaya nyanzvi kuti dzibatsire kugadzira kernel mune izvi. Iyo Linux network stack haina kutyisa, asi inogona kuvandudzwa. FreeBSD muenzaniso wekutevera, sezvo iine enable network stack, uye ndizvo zvakazotevera Facebook, kuenzanisa kana kuivandudza.
Chengetedzo: kuti neGNU / Linux unogona kuva wakachengeteka (kumwe kugovera kupfuura mamwe) kupfuura nemamwe masisitimu kuri kwechokwadi, asi isu hatigone kuzorora uye toti Linux ndiyo yakachengeteka kwazvo pasi, nekuti hachisi chokwadi. Uye mune ino kesi ini ndinodzokera kuBSD kuti ndipe muenzaniso wechengetedzo neiyo OpenBSD chirongwa. Kune iyo Linux Foundation uye FSF kugovera zviwanikwa kuti zviongorore kuchengetedzeka kwemapurojekiti avo kana kutsaurira timu yenyanzvi kupurinda kuchengetedzeka kwechirongwa kwaisazokuvadza.
Pressure boka: kune anti-Linux "lobby" iyo inouya kubva kumamwe makambani akaita seMicrosoft, kunyangwe pasabata yakaratidzwa naSatya Nadella munguva, uye Apple. Asi neimwe nzira kana imwe, kumanikidza kwavanogona kushandisa nekuda kwavo kwehukama mamiriro zvinoreva kuti vatyairi, software uye matekinoroji haasvike kuLinux nekukurumidza. Zvichida iyo FSF kana iyo Linux Foundation inogona kuita chimwe chinhu mune izvi nekudzvanya neimwe nzira kuitira kuti, semuenzaniso, zvinhu zvakaita seEFI Chengetedzo Boot zvirege kuitika, kana kuona yemahara zviyero sezvinoita AMD. Zvakare, kwete izvo chete, iwe unogona zvakare kuita pro-Linux mishandirapamwe. Wati waona chero kushambadzira kweLinux paTV kana imwewo off-line media? Uye kana ndikadzokorora iwo mumwe mubvunzo, ndichichinja "Linux" kuita "Microsoft Windows" kana "Apple"? Saka mhinduro inosiyana zvinoshamisa.
Zvichida Panzvimbo pekushoropodza "vavengi" veLinux, mumwe anofanirwa kudzidza kubva pakunakira kwayo kuita nani. Kutora mazano kubva kuOS X, Solaris, FreeBSD, Windows, nezvimwewo, hakufanirwe kuenda kunopesana nemweya wepenguin sekureba kwazvakatemerwa kuita Tux the best. Chinja vavengi kuve mikana yekudzidza uye zvinokuvadza zvive zvakanaka.
Iwe unoona zvimwe zvinhu zvekugadzirisa? Usazeza kutsoropodza inotsanangura...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Linux inoyamwa ... Spanish-dhizaini
Chii chinonzi network stack? Kwaziso.
Pfungwa yakaipisisa kana pamwe inonyanya kukosha ichagara iri dambudziko rekuparadzaniswa.
Pamusoro pezvo, pane zvinongedzo zve "vakomana vanofarira", vachidudza semuenzaniso, kuti newbie anogara achipiwa "kutsoropodza" kuti amupe kugoverwa uye kuti anogona kupinda munyika yeGNU / linux. zvirinani kumupa tsananguro yezvauchawana? Ngatitaurei maitiro ekuisa chirongwa neiyo Synaptic.
Uye panogona kuve nekushoropodzwa kwakawanda, asi ngatione, chikamu chakakosha ndechekuti tingakanganwa sei kuva rakaparadzaniswa uto kuti uve chikamu chekupanduka kumwe chete?
Izvo ndezvekuti iyo ego yeLinux gurus inoenderana nehungwaru hwavo, ivo vakangwara zvakanyanya ivo vanozvikudza, uye vanowedzera classist nekuti ivo vanosvika pakutenda kuti Linux ndeye chete yeavo 'vanoziva'. Isu vamwe vanhu vanoshandisa Winbugs uye OSX.
Yakanaka mubvunzo wekupedzisira !!!
Jose Manuel Glez Rosas akadaro
Dhizaini uye mashandiro?
Iyo chete distro yandinoziva kuti yakanyatso kunaka vagadziri ndeaya anobva deepin.
Ivo vanogadzira avo ekushandisa, yavo desktop desktop, iko kunaka.
Pindura kuna Jose Manuel Glez Rosas
Ini handigovane chero chinhu nezve dhizaini, yekutanga ndeye kuzviisa pasi, semuenzaniso ndinovenga chimiro cheOSX uye cheWindows kana icho chandinokuudza kubva pandakanga ndiri musisitimu ino: V, asi ipapo ini ndinoisa XFCE mu Arch ine conkys yake yese uye puranga uye ini ndinorasikirwa nepfungwa dzangu ndichidana kuna Mwari wese kuti rakanaka sei tafura yangu, asi haizofarirwa nemunhu wese nekuda kwechikonzero icho icho haigone kutariswa seyakaomarara poindi nekuti inoteerera maonero emumwe nemumwe.
Ini ndinobvumirana nezvose zvinotaurwa muchinyorwa, meseji ndeyekuti mhosva hombe idzo Linux zvairi sezvazviri, zviri mukati meLinux nyika, uye dambudziko guru kusaremekedza ruzivo rwevashandisi. Muenzaniso ndewe LibreOffice, yechinyakare hofisi otomatiki iyo inokuvadza iyo retina, iyo inoshandisa iyo Hofisi 97 interface, nekubatana kwakashata neMicrosoft Office, nevapomeri ??? 'Iyo iMicrosoft nekuti mafomati ayo eimba haapi iwo chaiwo maratidziro, nekuti haigadzi vhezheni yeLinux, nezvimwe, nezvimwewo, blah, blah, nekuti vanovenga Ribbon interface' Uye kupomera zvakasara Linux zvinoita, nekuti kwavari iyo inofanirwa kuchinja ndeyeMicrosoft uye kwete kusimudzira Linux kuti ikunde desktops.
Ndakatoverenga zvirevo uko vanozvikudza kuti Linux ine iyo 2% yemusika, sekureva kwavo ndicho chinangwa chechokwadi chemahara software, kwete kuti ive inobatsira, kwete kukwezva nekuti ndeye mahara. Nooo, yemahara software inofanirwa kuvavarira kusvika kune vazhinji, iite inobatsira kuitira kuti pave nemaapplication. Ivo vefesistist vanoda kutitendisa kuti Linux haidi maficha ekushandira, uye kuti yemahara software inofanira kunge iri yemahara, kana imwe kana imwe. Linux haifanire kunge iri nhaka yeavo programmers vanozvirumbidza nekugona iyo yakaoma kunzwisisa, Linux inofanirwa kuve yakapusa, iine ruzivo rwakanakisa rwevashandisi, uye yakanangana neruzhinji rwevanhu.
Uye kunyangwe paine chokwadi chekuti isu tese tinobvumirana pamusoro pekuparadzaniswa uye kuparara kwemaitiro asina kujeka, matsva matsva acharamba achionekwa, uye isu ticharamba tichishaya zvekushandisa.
ivo vachaona akadaro
Ini handitendi zvachose kuti iyo LibreOffice interface yapera nguva, asi, ihwohwo hwakakura uye hunoshanda dhizaini dhizaini ... kunyangwe isingaite bhora kune asingazivikanwe uye erima ribhoni, ayo chete sevaya vakaisikidza mundangariro dzavo pfungwa yekuzvivhara se "yazvino" ... nyaya yakachena!
Zvese ichokwadi. Ndakagara ndichifunga kuti kushambadzira ndizvo zvaizotora. Senge zano, kusimudzira linux, enda kunzvimbo yeruzhinji uye utange kutamba nehutsi ... zvese pc kana steam console ... Asi ini ndingaite zvimwe chinhu chisingakurudzire, kana zvisiri izvo kuti vanochinja zvachose pfungwa yekuti " hapana anoshandisa linux ", vamwe vanoomerwa nekunzwisisa kuti zvese zvinoitwa panharembozha yavo zviri kumhanya nemambure mune iyo linux iripo ... kunyangwe chizvarwa chazvino chakanyanya kuwanda nenyaya dzehunyanzvi zvekuti kana vakashandisa mari yakawandisa pane nharembozha, kungopedzisira washandisa whatsapp kana facebook, vasina kana kana kamufariro kekuziva mashandiro anoita system, chero yaiswa nharembozha yako, pasina kufunga kuti zvese zvaunoita pane yako nhare, iro ruzivo rwuri kupfuura kuburikidza netiweki yemaseva kubva pairi iri 100% yakachengeteka ivo vanoshandisa linux. Kunze kwekusimudzira kwete chete nezvikwangwani kana nzira yekuishandisa, panogona kunge paine kushomeka kwehurukuro dzakawandisa pane mamwe mazwi, ndinofungidzira izvo zvingavaite kuti vade kuziva kuti zvinhu zvinoshanda sei.
Ndeipi pfungwa yechinyorwa? Kune atove zviuru zvakadai, handiti? Saka pane kumwe kupatsanurwa kweruzivo: p
Kupatsanurana hunhu hwehunhu hweGNU / Linux, uko nharaunda yakavhurika sosi isiri yedemokrasi, ndeye anarchist: Stallman akaita chimwe chinhu kuti abude mumombe, Torvald akaita chimwe chinhu kuti abude mumombe, uye nekudaro mutengesi ...
Uye kana mhumhi dzakasimudza makwai padzinowana kugona kwadzo uye nekutevera hunhu hwadzo, dzinotadza kuunganidzwa dzichitungamirwa nepfungwa yakafanana, nekuti inogara ichinhuwirira se "mufudzi wepachivande."
Mune democracy vanhu vazhinji vanosarudza hutungamiriri hunodzora ngarava kuenda kuchirongwa chinobatsira vazhinji; mune mhirizhonga mumwe nemumwe anozviitira uye anozviitira iye (kunyange gare gare achigovana ruzivo rwake nevamwe), uye ndicho chikonzero chekukamukana.
Zvingave zvakanaka kutarisa vadikani veGNU / Linux pane rakajairika basa, kuronga mazana ezviuru ehungwaru mune mamwe mapurojekiti; Asi kune izvo, kunzwisiswa kunofanirwa kusvikwa kuti izwi rekuti 'nharaunda' hazvireve boka kana kubviswa kwehukama.
Uye chipingamupinyi chikuru kune izvi ndeyeyeye hacker yake mafungiro eanarchist, anopenga nehunhu.
Erwin Bautista Guadarrama akadaro
Ini ndiri mushandisi mutsva, shanduko yakandibhadharira basa rakawanda asi ini ndichiri pano muGNU / linux kudzidza zuva nezuva, chikamu chakaomesesa cheshanduro yangu kusoftware yaive kunetsekana kwekuisa madhiraivha, software, iyo terminal , mazano matsva, mirairo nezvimwe, izvo iwe zvausingawone muma winbugs, zvese izvi zvakawedzerwa ku "nyore" izvo winbugs inoita zvese, zvinopedzisira zvotyisa vazhinji vevashandisi vanotsvaga zviri nyore muhupenyu hwavo, ini ndinoenderera uye ndicharamba ndichienderera pano , kudzidza nekupa nekukurudzira GNU / Linux. Asi ivo vanofanirwa kuita kuti zvinhu zvive nyore kune izvo zvitsva sezvo uku kushomeka kwekuenderana nehofisi, adobe, nezvimwe zvinoumba nyonganiso uye zvinotyisa izvo zvitsva.
Pindura Erwin Bautista Guadarrama
Ngatimbofungai zvishoma. Mune if linux kugadzira desktops zvakakura kwete kutumidza ese mapurogiramu uye mamwe. Asi dambudziko hombe ne linux uye yemahara software ndivo vanogadzira ivo pachavo Semuenzaniso debian vanhu avo vachangotsoropodza Ubuntu, nekutangisa kurongedza .deb zvirongwa. Chimwe chinhu kushayikwa kwekutaurirana uko kune, semuenzaniso, rinenge gore rapfuura ndakabvunza vanhu veinkscape kuti sei iwe waisakwanisa kugadzira mapeji kana machira sezvinoitwa naCorel, zvimwe zvishoma ivo vakandidzinga. Asi isu tinofanirwa kutaura chokwadi pachezvayo nzvimbo shoma uye mashoma mahara software ndeavo vanoteerera kune vashandisi, semuenzaniso blender iyo pachayo, ndinoda chirongwa kwazvo. Iniwo ndinofunga kuti yemahara software ine zvakawanda zvekupa kumakambani.Pamwe kana iwe ukagadzira yakanyanya software, semuenzaniso, libreoffice yekushandisa pamba ine zvirinani interface inogona zvakare kudzikisira utsotsi, semuenzaniso. Pamwe k3b yakavandudzwa kana brazier ine yakawanda yekurekodha mashandiro kana vhidhiyo vashanduri, kana chimwe chirongwa chakafanana neiyo convertx chingave chisina basa kubatsira piracy.
Fabian Alexis Inostroza akadaro
Ndakaverenga chinyorwa uye zvirevo uye kune akati wandei mapoinzi kwandinowana zvikonzero zvakasiyana.
Chekutanga pane zvese, ndinofunga isu tiri kutaura nezve Linux pane desktop, nekuti kubudirira pamaseva uye mune nhare yenyika zvinopfuura kuzivikanwa, nekuti kana mumwe munhu asingazive, Android ine Linux kernel, ikozvino zvichibva pane izvi zvandinogona kutaura. izvo (ini ndichaenda nemapoinzi epositi).
1 Iwe pamwe hauzoone ma greats esoftware seAdobe (yandinofungidzira kuti ndiyo poindi) kana Microsoft Office (iyo ingangouya nekukurumidza kwete kupfuura gare gare), uye imwezve nyanzvi-mhando mupepeti (wezve nyika yekusika), izvozvi ichi ichokwadi uye chinogona kukanda zvinopfuura chimwe chete, asi nyaya iripo ndeyekuti panguva ino pachine shanduko yepadigm sekusvika OS, ine windows 10 MS yakanzwisisa kuti modhi yekutevera iyi software sevhisi (zvakanaka kana zvakaipa zvinoenderana nemushandisi wega wega neruzivo nezvazvo). Mupfungwa iyoyo, inyaya yekuona Android, iyo inonyanya kuzivikanwa Linux pasi rose; Yayo modhi isoftware sevhisi nekuti kambani iri kuseri kwayo ndeye masevhisi (google), uye kana iwe ukaona uine ma greats esoftware ari kuvakurira, dambudziko reGoogle nderekuti rakasarudza kubheja pane desktop pane chrome os (iri linux zvakaenzana) asi zano rayo rakapesana zvakanyanya nezvatinonzwisisa neOS, pamwe dai Google ikagunun'una kune echinyakare desktop masisitimu, zvaizochinja nyaya yacho zvishoma. Nezve Hardware, makambani ari kupa makomputa nema linux masisitimu, kune makambani ari kubuda anopa linux (system76 semuenzaniso), zvinoitika ndezvekuti kune dzimwe nyika monopolization yemahwindo yakakura kwazvo, yakawedzerwa pakushaikwa kweruzivo rwevashandisi nezvekodzero dzavo uye nyaya dzesainzi yemakomputa, inoita kuti zvinyatsoita kuve muyero wechokwadi. Iye zvino rutsigiro rwehurdware zvinosiririsa zvinoenderana nemutengo wevashandisi, ndosaka zvichinetsa kuona kuita kuri nani kana kuita kwese nemavhidhiyo makadhi semuenzaniso. Saka kune imwe nhanho (kunze kwekunge google yaita chimwe chinhu, xiaomi yakaburitsa chimwe chinhu, kana imwe hurumende yaita chimwe chinhu) iwe uri chokwadi, kunze kwewaini uye mudiwa, nekuti izvo zvinodzikisira zvakananga kuvandudza kwekuzvarwa mumaonero angu.
2. Pano handikwanise kuwana chikonzero cheinotevera. Kutanga, nekuti huwandu hwemapakeji muLinux haupfuure mashanu kana ndisina kukanganisa, saka haugone kusanganisira mafaera escript, kana iwo akamanikidzwa, saka mupfungwa iyoyo yakanyatsoenderana, Windows uye OS X zvakare vane zvinopfuura chimiro chepasuru. Dambudziko hombe kusanzwisisa kukosha kweiyo system, uye ndiyo pfungwa yeModularity, Linux yakafanana neLegos, kana iwe ukakumbira mumwe munhu kuvaka imba neLegos, hapana munhu anozviita zvakafanana. Modularity ndiyo hupfumi hukuru hweLinux, iyo yakaita kuti ienderane nemhando dzakasiyana siyana. Dambudziko nderekuti pamwe hatitsanangure kana kunzwisisa pfungwa iyi. Zvino pamusoro pehuwandu hwema distros, nekuti ini ndinofunga kuti kana zvichidikanwa kuti mushandisi wenguva dzose arongedze ma distros, nekuti zviri pachena kuti mushandisi akaremerwa nenhamba iripo yemastros, asi kana isu takakamurwa uye tikatosvika kune distros « Vanamai 'havana nyonganiso, vamwe vese' vakagadzirwa-mushandisi 'kana' zvakagadzirwa munharaunda 'zvinhu zvinoda kutsanangurwa (kudzidzisa nezveLinux nemafungiro ayo akakosha kwakakosha).
3.Kubvumirana zvachose, mukugadzirwa uye mashandiro mu2015 linux iri parutivi neOS X neWindows, zvese Gnome neKDE uye Kubatana vakakura zvakakwana uye vakashanda zvakanaka kusimuka kumushandisi, iri iro uzivi hweGnome, hwakareruka iko kushandiswa kwekombuta interface, Kubatana zvakafanana. Chimwe chinhu ndechekuti ivo vanogadzira havabatise iwo marongero, asi iyo haisi iyo mhosho yedesktop nharaunda. Mamiriro ezvinhu ane kukwirira kukuru, kunze kwekuti iwe unofunga OS X yakanyanya kunaka ndeyekuzviisa pasi, semuenzaniso ini ndinoona KDE ichishanda kupfuura OS X interface, asi zvinoenderana nemushandisi wega wega uye iyo BASA ROKUSHANDIRA. Isu tinozvienzanisa nemawindows uye OSX uye isu tinoda kuchinjisa iwo mafambiro ebasa, kunova kukanganisa. Kana kuti Apple yakashandura chimiro chayo kuti ikwane windows interface? kuve iyo isiri iyo yakawanda system futi. Nharaunda dzinofanirwa kunatsiridza huzivi hwavo asi kwete kuutsvaga kubva kune mamwe masisitimu. Iye zvino unodzokera mukukanganisa kwekuratidzira nzira yako yekushandisa system mune zvakajairika, ingo tarisa mashandisiro ayo akawanda anoipa uye iwe uchaona kuti nharaunda dzazvino dzinopa zvakafanana, nenzira yakapusa, inyaya yekuona mimhanzi yakanaka, totem kana Nautilus.
4. Network stack, hapana kuramba, ndinokuwana iwe mune izvozvi.
5. Zvakanaka, ini handizive kusvika papi asi ndinonzwisisa kuti zvirongwa zvinogara zvichiongororwa kuitira kuchengetedzeka kwavo. Zvekare, iyo modhi yekuvandudza yeLinux inokutendera iwe kuti uwane kutsungirira uye nekugadzirisa nekukurumidza. Muchiitiko che Android, ibasa reGoogle, uye ini ndinoona kusagadzikana kweasoftware kusinganzwisisike, asi izvo zvinoteerera kumhanya kwayo uye chimiro chebudiriro.
6. Kushaikwa kwekushambadzira nezve Linux, hongu. Dambudziko nderekuti masangano esoftware anokurudzira kushandiswa kweLinux uye rusununguko rwemakomputa senge FSF, kufamba nezvishoma zviwanikwa, kana tikazowana zano, munyika ino inotongwa nehupfumi avo vane izwi ndeavo vanofambisa mari chikonzero, Obama anosangana nemakambani eSilicon Valley, asi chete ndiyo inobatsira zvikuru. Iye zvino zvakakoshawo kuita zvinopesana neruzivo uye pamusoro pezvose, kuita basa rekudzidzisa, kana tikasawana masangano edzidzo kusimudzira kushandiswa kwemahara software kana Open Sosi, isu takanganisa, nekuti isu tinoteedzera kushandiswa kwezvishandiso izvo pakupedzisira inozove zviyero zveiyo facto (mhoro mafomati eHofisi) uye kana vakura uye vava vanhu vakuru, havagone kubuda imomo. Ndinozvitaura semudzidzisi zvandiri, uye ndaona mamiriro ezvinhu apo vavanoshanda navo vanozadza miromo yavo nekuremekedza mitemo uye vari vekutanga kushandisa Windows nePirate software.
Zvino maererano nezvakataurwa:
1. Ehe, kune vanhu vanozvitutumadza uye vanorwisa mahara, asi iwe unovawana muWinows uye OS X maforamu zvakafanana, kuri kungoziva kusefa nekuona wekutendeukira.
2. Izvi zvinoitirwa megajavisan: yemahara software inogona kubatsira, muchokwadi Stallman anopa monetization modhi pasi pemahara software; saka urikukanganisa. Yemahara software inoreva pfungwa dzakanangana nehunhu kana uchishandisa system kana software (inoenderana nerusununguko rune), ndosaka iwe uchinge wawana vanhu vanopokana neiyo proprietary modhi. Chimwe chinhu, sekureva kwaStallman ndeye OpenSource, izvo zvinoreva zvinoenderana nehunyanzvi chete. Sezvo iye akamboti Mahara software haina kufanana neyemahara (ndosaka achishandisa izwi rekuti Mahara uye kwete Mahara). Izvo zvinoitika ndezvekuti iyo LInux = yemahara pfungwa yakamonyaniswa, nekuti masisitimu anogoverwa zvakasununguka.
3. Nyaya yemafomati yakakurukurwa kakawanda, idambudziko rekambani iri kubvunzwa (MS) nekuti semuenzaniso tinoenda neimwe nzira, mune yangu pachezvangu mafomu akavhurika anoshanda chaizvo pakati pezvishandiso, asi pano zvoitika chimwe chinhu. zvakasiyana, kuitiswa kunoitwa neMS hakukwirirane, ndosaka ODF inogona kunge isingaratidzike, pachinzvimbo MS inounza kumisikidza mafomati zvakashata kuti aenderane, kunyangwe pakati pemidziyo yayo (edza kugadzira docx muhofisi 2013 uye ndapota edza shanduro dzekare).
4. Kune vashandisi vatsva: zvirinani kudzidza kusimudzira mabhenefiti e linux pane kurwisa zvakakanganiswa nemahwindo, mira kuti "Winbugs", munhu anogona kupenya nechiedza chake, haufanire kudzima mamwe
Pindura kuna Fabian Alexis Inostroza
Ndakafarira chinyorwa ichi. Ini ndinoda linux ndakaisa Ubuntu, Kubuntu akashandisa macomputer ane debian uye canaima. Yakashandiswa puppi kuita faira sisitimu inogadzirisa uye zvigamba uye gadzira linux vhezheni yekutanga. Ndakaedza mavhezheni ehupenyu e fedora, suse, mint, nezvimwe, kutaura chokwadi ndakaroora Lubuntu 16.04 pamalaptop angu, inopa zvimwe asi hapana chakakosha.
Ini handizive kuti nei ruvengo rwakawanda rwevamwe vane canonical asi ini ndinotenda kuvapo kwawo. Nezve izvo zvataurwa pamusoro apa ini ndinongotaura chimwe chinhu: matambudziko andapa ndanga achinyanya kunge aine kutsamira uye pachimiro chemamwe mapurogiramu senge libreoffice, izvo zvinongotyisa. Izvo hazvisi zvekuti ivo vanogadzira dombo re ms office asi iwo maoniki !!!!!!! ndapota zvinotyisa.
Nezve kupararira kwezviwanikwa, zvakanaka izvo zvinogona kutaurwa ndinofunga kuti Debian anoita basa rakanaka asi ivo vanofanirwa kusimbisa kuve vane hushamwari mukuisirwa uye imwe roll ndeyekuvaka network yangu yePC neWindows (nechisungo) uye avo vane Linux. Ehe, ini ndinoda Lubuntu, ini handisi kutsvaga chinoshamisira desktop, kunyange ini ndichifunga kuti mushure mekuzviita zvishoma zvinotaridzika chaizvo, zvinoshandisa mashoma zviwanikwa uye zvinoita zvese zvandinoda.